ချစ်သူများနေ့အတွက် မုန့်လက်ဆောင်း | Wutyee Food House
« အာလူးပူတင်း (ချစ်သူအတွက် ဟင်းလက်ရာ)
ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ) »
February 5, 2012 by chowutyee မုန့်လက်ဆောင်း
ချစ်သူများနေ့ အတွက် အထူးစပရှယ်ကတော့ မုန့်လက်ဆောင်း အေးအေးလေးပါပဲ။ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ ရင်အေးချမ်းအောင် မုန့်လက်ဆောင်လေး မြည်းသွားကြပါအုန်းနော်။ မုန့်လက်ဆောင်ကို ထန်းလျက်ရည်နဲ့ လုပ်သလို အုန်းနို့ရည်နဲ့လည်း တွဲစားကြပါတယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ ၂မျိုးလုံးကြိုက်တာမို့ လုပ်နည်း၂ခုလုံး မျှဝေပေးထားပါတယ်…
၁။ မုန့်လက်ဆောင်းဖက် – ၁ပြည်
ထန်းလျက် မုန့်လက်ဆောင်း ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၂။ ထန်းညက် – ၄၀၀ ဂရမ်
၃။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
အုန်းနို့ မုန့်လက်ဆောင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ
၄။ အုန်းသီး – ၁လုံး (အရည်ညှစ်ထားပြီသား)
၅။ သကြား – ၂၀ကျပ်သား
၇။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၁။ လုပ်ပြီးသား မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် များကို ဒယ်အိုး အကြီးတစ်ခုထည့်ပြီး ရေစိမ်ထားပေးပါ။
၂။ အရင်ဆုံး အုန်းနို့ မုန့်လက်ဆောင်းအတွက် ဒယ်ထဲသို့ အုန်းနို့ရည်များ ထည့်ကာ သကြား(၂၀ကျပ်သား) ထည့်ပြီ သကြားများ အရည်ပျော်အောင် အပူအနည်းငယ်ပေးလိုက်ပါ။
၃။ ပြီလျှင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီ အုန်းနို့ရည်များကို ပြန်အအေးခံထားပေးပါ။
၄။ အအေးခံပြီမှ ခွက်တစ်ခုထဲ မုန့်လက်ဆောင်း တ၀က်ခန့်ထည့်ကာ အုန်းနို့ရည်ထည့်ပေးပါ။
၅။ ပြီမှ မုန့်လက်ဆောင်း ပိုစိမ့်သွားအောင် နို့စိမ်း စားပွဲတင်ဇွန်းခန့် ထည့်လိုက်သေးတယ်။
၆။ ရေခဲတုံးအနည်းငယ်ထည့်ပြီ အုန်းနို့ မုန့်လက်ဆောင်းလေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ရ။ ထန်းလျက်ရည်နဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းမှ ကြိုက်သူများအတွက်တော့ ထန်းလျက်များကို ဒယ်ထဲ ရေ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ကျိုထားပေးပြီး မပျစ်မကျဲ အနေထားရောက်လျှင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီ ထန်းညက်ရည် ခွက်တစ်ခုထဲ ပြန်ထည့်ထားကာ အအေးခံထားပေးပါ။
၈။ ပြီမှ ခွက်ထဲ မုန့်လက်ဆောင်ဖက် တ၀က်ထည့်ပြီ ထန်းလျက်ရည်များကိုထည့်ကာ ရေခဲတုံးလေးများထည့်ပေးပါ။
၉။ ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းအေးအေးလေးတွေကို ရင်ခုန်စွာ သုံးဆောင်ကြစို့နော်..
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 23 Comments	23 Responses
on April 14, 2010 at 4:09 pm | Reply Hmone Gyi
himmm eat chin like tar…lasst time tone ka top gyi gyi house ma top eat ya tae tal….come uk soon😛
on April 15, 2010 at 3:25 am | Reply chowutyee
ယူကေ လာစရာမလိုပါဘူး.. ကိုယ်ပြန်လာခဲ့ရင်ရပြီး.. ဟီးဟီး..😛
on April 14, 2010 at 9:29 pm | Reply zaw
မုန်လက်ဆောင်း အေးအေး လေးကရင်ကိုအေးမြစေပါတယ်ဗျာ အခုလို ရက်တွေမှာ မ၀တ်ရည် ကမနားမနေ စာတွေကိုကျိုးစာပြီးတင်ပေးနေတာကိုလဲး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်ကို အလွမ်းပြေလေးတွေနဲ.ထိတွေခွင်.ရသလို မ၀တ်ရည် လဲး မုန်.လက်ဆောင်း အေးအေး လေးလို. ထာဝရအေးချမ်းပါစေလို. ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ ကျေးဖူးအထူးတင်ပါတယ်
on April 15, 2010 at 3:24 am | Reply chowutyee
ခုလိုဆုတောင်းပေးလို့ ဇော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ…🙂
on April 15, 2010 at 3:38 am | Reply နွေးနေခြည်
Happy Myanmar New Year, NgYee!
on April 15, 2010 at 3:41 am | Reply chowutyee
Happy Myanmar New Year, friend, naychi..😉
on April 15, 2010 at 12:11 pm | Reply zaw
စိတ်ထားပြည်.၀ တဲ. မ၀တ်ရည် အတွက် အေးချမ်းမှု.တွေ နဲ.ပြည်.စုံမှာပါ အများအတွက် အခုလို အဝေးရောက်မြန်မာတွေအတွက် အစားစာ ချက်နည်တွေကို စေတနာနဲ.ရေးပေးနေတဲ. မ၀တ်ရည် အတွက် လိုအင်ဆန္ဒတွေ နဲ.အတူ မြန်မာ နှစ်သစ်မှာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
on April 16, 2010 at 8:04 am | Reply chowutyee
Really Thanks Zaw!!!🙂
on February 23, 2011 at 3:28 am | Reply Thwe Thwe
I can’t get မုန့်လက်ဆောင်း here.
on February 25, 2011 at 9:38 am | Reply chowutyee
သွယ်သွယ်ရေ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် လုပ်နည်းတော့ ၀တ်ရည်လည်း မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် တချက်လောက် စာအုပ်ထဲမှာ ပြန်ရှာပေးပါ့မယ်နော်..😀
on February 23, 2011 at 3:30 am | Reply Thwe Thwe
I mean မုန့်လက်ဆောင်းဖက်. How I can make မုန့်လက်ဆောင်းဖက်.
Thanks Ma Wut Yee
on February 26, 2011 at 7:21 am | Reply chowutyee
သွယ်သွယ်ရေ မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်နည်း http://shinlay.blogspot.com/search/label/Food ရေးထားပါတယ်…
on February 26, 2011 at 4:06 pm | Reply Thwe Thwe
You helping mealot. Thanks you so much A Ma.
on October 3, 2011 at 12:23 pm | Reply baby lay
မုန်.လက်ဆောင်းဖတ်…..၀ယ်လို.ရမယ်.နေရာလေးပြောပြပါနော် sis..thks alot
on October 4, 2011 at 6:56 am | Reply chowutyee
သင်္ကြန်နီးမှ ဈေးမှာ ရောင်းတာများတယ်…
on October 5, 2011 at 2:13 pm | Reply babylay
လုပ်နည်းလေးရော….. anyway thks alot..:P
on October 6, 2011 at 2:50 am | Reply chowutyee
on April 5, 2012 at 5:50 pm | Reply U Sein
can’t read your text and recipes ?.. why!
on April 6, 2012 at 2:12 am | Reply chowutyee
U can download Myanmar Font Here: http://www.alpha.com.mm/blogday/image/IEZawGyiGtalkfont.EXE
on April 19, 2012 at 5:35 pm | Reply Borar
on April 20, 2012 at 5:12 am | Reply chowutyee
မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်နည်း http://shinlay.blogspot.com/search/label/Food ရေးထားပါတယ်…
on May 14, 2012 at 2:06 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] February 5, 2012 ချစ်သူများနေ့အတွက် မုန့်လက်ဆောင်း […]
on May 23, 2012 at 12:43 pm | Reply mu yar
ဖာလူဒါလုပ်နည်းလေးပေးပါလားနော်။ နောက်ပြီး မုန့်ကျွဲသဲလေးလည်း မေ့နေတယ်နဲ့ တူတယ်နော်။ အချိန်ရရင် ပေးပါအုံးနော်။